Advanced Super Trend Forex Ukuhweba Isu - ForexMT4Indicators.com
Ikhaya Amasu we Forex Advanced Super Trend Forex Ukuhweba Isu
Njengabahwebi sivame ukubheka amasu ngokunemba okukhulu. Sivame ukuhehwa ngamasu akhombisa amazinga aphezulu wokuwina noma amanani esiteleka. Kodwa-ke ngasikhathi sinye sifuna amasu anokulinganiselwa okuphezulu kwezingcuphe zemiklomelo. Lokhu kaningi kuyinjongo yabathengisi abaningi, ukuba nezinga lokuwina elicishe liphelele futhi liwine eliphindwe kaningana kunelahleko. Siyethemba ukuthola lelo Grail Elingcwele elisivumela ukuba sibe nokuhle kunakho konke imihlaba.
Awukwazi ukuba nekhekhe lakho futhi ulidle futhi. Imvamisa abathengisi babethola omunye komunye. Kungaba ukuthi banamasu anamazinga wokuwina aphezulu kakhulu noma amasu anezilinganiso ezinobungozi obukhulu kakhulu. Abathengisi abaningi banamasu aphakathi nendawo. Kwanele nje ukwenza amasu abo azuze ngokuhamba kwesikhathi.
Umbuzo uthi sifika kanjani ekuhwebeni ama-setups lapho kunenani elifanele lesilinganiso sengozi yomvuzo ngenkathi sinezinga elihle lokuwina.
Konke kumayelana nokuhlangana. Ukuhweba ngezingqinamba kuvame ukusho ukuthi sidayisa ngamathuba amahle nokuthi kunomfutho ngemuva kokuhweba. Umfutho owanele wabathengisi abaningi ukuthi banake.
I-Advanced Super Trend Forex Trading Strategy isu elinikeza abathengisi amasethingi wokuhweba okungenzeka abe nethuba elikhulu lokuthola isivuno esihle kwezentengiselwano okungaholela ekuthambekeni. Isebenzisa izinkomba ezintathu ezihambisanayo futhi inganikeza abathengisi amasiginali wesimo esiqondile.
Super Trend Inkomba
1 Super Trend Inkomba
2 Inkomba ye-Octopus
3 Hull Moving esijwayelekile
5.3 Indlela ukufaka Advanced Super Trend Forex Ukuhweba Isu?
Inkomba yeSuper Trend inkambiso elandela inkomba yezobuchwepheshe esiza abathengisi ukuthi babone umfutho, ukuguqulwa kwethrendi nokuqondiswa okujwayelekile kwemakethe.
Kuyinkomba elula eyenza ukusetshenziswa kwe-Average True Range (ATR) njengesisekelo sokukhomba ukuqondiswa kwethrendi. Iphindaphindeka i-ATR ngokusetha kabusha okuphindaphindwayo ngumhwebi. Ibese ihlela umugqa eshadini lentengo eliphambene nesiqondiso sethrendi. Uma intengo yephula leli zinga, lapho-ke imakethe iyahlehla.
Inkomba ifaka umugqa we-lime ngezansi kwesenzo sentengo ukukhombisa ukuthambekela kwe-bullish futhi ihlela umugqa obomvu ngaphezu kwesenzo sentengo ukukhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Izimpawu zokubuyiselwa emuva kwethrendi zingenziwa ngokususelwa ekushintsheni kolayini nasekushintsheni umbala wawo.
Isikhombi se-Octopus inkomba elandelayo etholakala ikakhulu esetshenziselwa ukuhlunga abathengisa ngokususelwa kwinkambiso yokuthambekela noma inkomba yokuthambekela.
Ifaka imigoqo evele iguqule umbala noma nini lapho ithola ukuguqulwa kwethrendi. Amabha aluhlaza akhombisa ukuthambekela kokuthambekela kwe-bullish, ngenkathi amabha abomvu akhombisa ukuthambekela kwe-bearish.
Abahwebi bayisebenzisa njengesihlungi sezohwebo ukugwema ukuhweba okuphikisana nomkhuba wamanje. Noma kunjalo, ingasetshenziswa futhi njengesiqinisekiso sokuguqulwa kwesimo ngokuya ngokushintsha kombala wamabha.
Izilinganiso ezihambayo mhlawumbe zingenye yezinhlobo ezisetshenziswa kakhulu zenkomba yezobuchwepheshe futhi lokhu kungenxa yezizathu ezizwakalayo. Ukuhamba okumaphakathi kuyasiza ngoba kusiza abathengisi ukuthi babone ukuqondiswa kwesitayela kanye nokuhlehliswa kwethrendi okuyizisetho ezinhle kakhulu zokungena kwezohwebo.
Noma kunjalo, izilinganiso eziningi ezihambayo zinezinkinga ezimbili ezivamile. Izilinganiso ezihambayo zivame ukusilela emuva futhi zikhiqize amasiginali angaba yi-tad ngemuva kwalokho abathengisi abangafuna. Izilinganiso ezihambayo nazo zivame ukuveza izimpawu ezingekho emthethweni ngesikhathi sezimakethe ezinomsindo nezomsindo.
The Hull Moving Average (HMA) yasungulwa ngenhloso yokubhekana nalezi zinkinga. Kuyisilinganiso esihambayo esivame ukushesha kakhulu futhi siphendule. Ngesikhathi esifanayo, ibuye ikwazi ukuhlehlisa ukunyakaza komugqa wesilinganiso sokuhamba. Lokhu kusinikeza umugqa wesilinganiso oshukumisayo ophendulayo kakhulu kepha futhi ongathinteki kakhulu kwizimpawu zamanga ngenxa yomsindo wemakethe.
Le nguqulo ye-HMA ihlela umugqa oguqula umbala noma kunini lapho ithola ukuguqulwa kwethrendi okungenzeka. Ihlela umugqa ojwayelekile wokuhamba oluhlaza ukukhombisa ukuthambekela kwe-bullish noma umugqa omnyama we-violet ukukhombisa ukuthambekela kwe-bearish. Abahwebi bangasebenzisa ukuguqulwa kombala womugqa njengophawu lokuguqulwa kwethrendi okungenzeka.
Lelisu lokuhweba isu lokuguqula umkhuba elikhiqiza okufakiwe kokuhweba okususelwa ekuhlanganeni kwemikhuba emithathu elandelayo yezinkomba ezishiwo ngenhla.
Isiginali evela kwinkomba yeSuper Trend izosuselwa ekushintsheni komugqa weSuper Trend nasekushintsheni umbala wayo.
Esibonisweni se-Octopus, amasignali wokuguqula umkhuba azomane asuselwe ekushintsheni kombala wemigoqo yawo.
Ngakolunye uhlangothi isignali yeHull Moving Average nayo izosuselwa ekushintsheni kombala womugqa waso ohambayo.
I-SuperTrend (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
I-Octopus_1 (ukulungiselelwa okuzenzakalelayo)
Othandwayo Isikhathi Ozimele: 1-ihora, 4-ihora namashadi nsuku zonke
Amabili Wemali: Ama-FX majors, abancane neziphambano
Ulayini weSuper Trend kufanele ushiye ngezansi kwentengo futhi kufanele ushintshele kukalamula.
Imigoqo yezinkomba ze-Octopus kufanele ishintshe ibe luhlaza.
Ulayini we-Hull Moving Average kufanele ushintshele kokuluhlaza.
Faka i-oda lokuthenga ekuhlanganeni kwezimo ezingenhla.
Setha ukulahleka kokuma ngezansi komugqa we-Super Trend nolayini we-Hull Moving Average.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho ulayini weSuper Trend usuka ngaphezu kwentengo futhi ushintsha ubomvu.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imigoqo yezinkomba ze-Octopus ishintsha ibe bomvu.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho umugqa we-Hull Moving Average ushintshela ku-violet emnyama.
Ulayini weSuper Trend kufanele ushiye ngaphezu kwentengo futhi kufanele ushintshe ubomvu.
Imigoqo yezinkomba ze-Octopus kufanele ishintshe ibe bomvu.
Ulayini we-Hull Moving Average kufanele ushintshele ku-violet emnyama.
Faka i-oda lokuthengisa ekuhlanganeni kwezimo ezingenhla.
Setha ukulahleka kokuma ngaphezu komugqa we-Super Trend nolayini we-Hull Moving Average.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho ulayini weSuper Trend usuka ngaphansi kwentengo futhi ushintshela kukalika.
Vala ukuhweba ngokushesha nje lapho imigoqo yezinkomba ze-Octopus ishintshela kokuluhlaza.
Vala ukuhweba ngokushesha lapho umugqa we-Hull Moving Average ushintshela kokuluhlaza.
Leli su lihlinzeka ngamasignali wokungena kwezohwebo anethuba elihle lokuwina futhi angaveza isivuno esihle.
Ukuhlangana kwalezi zinkomba ezihambisanayo kunikeza inkomba eqinile yokuhlehliswa kwethrendi okuvame ukuholela ekuguqulweni kwangempela kwethrendi.
Ukuba necebo lokuphuma eliphelile kuvumela abathengisi ukuthi basebenzise inzuzo etholakala kuzisetho zokuhweba ezibangela ukuthambekela.
Advanced Super Trend Forex Trading Strategy is a combination of Metatrader 4 (MT4) inkomba(s) kanye nesifanekiso.
Advanced Super Trend Forex Trading Strategy inikeza ithuba ukuthola izici ezihlukahlukene futhi amaphethini intengo Dynamics ezingasaziwa ezingabonakali ngeso lenyama..
Indlela ukufaka Advanced Super Trend Forex Ukuhweba Isu?
Thwebula Advanced Super Trend Forex Trading Strategy.zip
Iya kwesokudla ukukhetha Advanced Super Trend Forex Ukuhweba Isu
Uzobona Advanced Super Trend Forex Ukuhweba Isu iyatholakala kwi Ishadi yakho
Isiqephu esedluleIsibikezelo Oscillator Inkomba MT4
Isihloko esilandelayoIsu Lokuhweba Ngezimakethe Zokubhebhana